L'Oréal Revitalift Pro Youth Essence Face Sheet Mask Plumping 30g – SUNNY eSTORE
L'Oréal Revitalift Pro Youth Essence ...
L'Oréal Revitalift Pro Youth Essence Face Sheet Mask Plumping 30g
L'Oréal ParisSKU: G3614300
၁၅ မိနစ် Mask ကပ်ထားခြင်းက Essence ၁ ဘူးစာ သုံးခြင်းနှင့် ညီမျှတယ်။ ၁၅ မိနစ်အတွင်း နုပျို ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကို ချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်စေမယ်။ 0.33 mm ထိပါးလွှာသော ဂျပန် cotton အသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပုံမှန်ထက် ၁၀ ဆပိုများသော Essence ပမာဏကို သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် အသားအရေကိုကြည်လင် ချောမွေ့ခြင်းတို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်သော ပန်းနှင်းဆီ Damask Rose ဖြင့် အဓိကပြုလုပ်ထားသည်။ Hyaluronic Acid ပေါင်းစပ်ထားသော Plumping Essence ပါဝင်မှုကြောင့် အသားအရေကို တင်းရင်း ဖောင်းပြည့်ကာ နုပျိုစေသည်။
သန့်စင်ထားသော မျက်နှာတွင် အပြာရောင်အလွှာကို အပြင်ဘက်ထားပြီး ကပ်ပါ။
အပြာရောင် အလွှာကို ခွာချပါ။
Mask ကို မျက်နှာပေါ်တွင် ကွက်တိဖြစ်အောင် နေရာချပြီး ၁၅ မိနစ်ထားပါ။
Mask ကိုဖယ်ပြီး essence များ မျက်နှာအတွင်း စိမ့်ဝင်မှု မြန်စေရန် Massage လုပ်ပါ။
Enjoy the power of 1 bottle of essence inamask. Japan exclusive 0.3mm this tissue technology for maximum essence absorption and benefits. Retain 10x more essence to intensely penetrate into skin. Makes your skin more plumpy & smoother with healthy radiance in 15 minutes and improve skin tone after4weeks.
Apply on clean face with blue protective film facing outwards
Remove the blue protective film, adjust the mask contours on your face
Remove mask and pad remaining essences on face for absorption